China High Quality Specialty Battery Holder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
CR2032 အထူးဘက်ထရီဘက်ထရီကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော CR2032 ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သည်။
ဤ CR2032 အထူးဘက်ထရီဘက်ထရီကို ABS ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆက်အသွယ်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုများကိုအာမခံနိုင်ပြီးအဆက်အသွယ်ခုခံမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံသောဤအကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူများသည်အဓိကဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများအားလုံး၏လစ်သီယမ်အကြွေစေ့ဆဲလ်များအားလုံးကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော notched battery slot ကိုပေးသည်။
၂။ ဘက်ထရီပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာအထူးသတ်မှတ်ချက် (Product Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် CR2032 အထူးဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ
ပစ္စည်း: ABS+ Brass Tin Plated
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: ၂၁.၃*၂၃.၀*၆.၃ မီလီမီတာ
၁။ ဤ CR2032 အထူးဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် ၃.၀v ဘက်ထရီကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်
6. အရည်အသွေးမြင့် ABS ပစ္စည်း
ဘက်ထရီအထူးကိုင်ဆောင်သူ၏ ၄ င်းကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: CR2032 အထူးဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူအားလုံး
7. အထူးဘက်ထရီပိုင်ရှင်၏ FAQ
hot Tags:: အထူးဘက်ထရီသိုလှောင်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်သူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သူ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်